ReactOS, Windows ၏ Open Source ဗားရှင်း Linux မှ
Linuxero ပါ | | ဖြန့်ဝေ
operating system တစ်ခုအကြောင်းပြောနေတာအခါ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်, အသုံးအများဆုံးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Linux ကို ပထမ ဦး ဆုံးစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောအခမဲ့လည်ပတ်ရေးစနစ်သာမက (လူကြိုက်အများဆုံး) ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရရမည်။
ဒီနေ့ငါတို့ကိုမင်းကိုပြမယ် ReactOS၀ င်းဒိုးအပလီကေးရှင်းများ (နှင့်ဒရိုင်ဘာများ) နှင့်အထူးသဖြင့်ဗားရှင်းများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျမရှိသော open source operating system တစ်ခုဖြစ်သည် Windows XP၊ Windows 7၊ Windows Server 2012.
ဗိသုကာဒီဇိုင်း၏အခြေခံမူအပေါ်အခြေခံပါတယ် WindowsNT, ReactOS အပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ် Linux ကို နှင့်ဗိသုကာနှင့်အတူမည်သည့်ဒြပ်စင်မျှမထားဘူး UNIX.
Su ကြည့်ရှု့ခံစားသည် ၎င်းသည် Windows 2000 နှင့်တူညီသည်။ နာမည်ကျော် "Start" menu တွင်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး ၂၀၀၀ နှင့်အတူကွန်ပျူတာကိုသုံးသည်ဟုပြောနိုင်သော်လည်းအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်။ ဝန်ခံရမည်က၎င်းတို့သည်ဤလက္ခဏာများနှင့်အတူ operating system ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည် alpha phase ရှိသော်လည်း၎င်းသည်တည်ငြိမ်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောနည်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းသည်အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။
စတင်မျက်နှာပြင်။ ReactOS 0.4
သို့သျောလညျး ReactOS ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးကိုရိုးရှင်းသောတုပမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည် ၀ င်းဒိုးတွင်အလိုအပ်ဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်၍ Package Manager (အထုပ်မန်နေဂျာအကောင်းဆုံး Linux စတိုင်၌။ ၎င်း မှနေ၍ Windows applications ပုံစံတွင် Firefox, Libreoffice, Gimp အစရှိသောအခမဲ့ application မျိုးစုံကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဒီ operating system ကိုစမ်းသပ်ဖို့ငါ Linux မှာ Firefox, Chrome, VLC, Gimp, LAMP (ဤကိစ္စတွင် WAMP), Python နှင့် Java, MySQL နှင့် Postgres တို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးများသော software ကို install လုပ်ခဲ့သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်ပြproblemsနာမရှိဘဲနှင့် Linux တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုအလားတူနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ Linux သာမဟုတ်ဘဲ Windows သာဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင်မကောင်းသောစှဲမှုမရှိပါ ReactOS။ ၎င်း၏ graphical interface သည်ခေတ်မီ Linux desktops များကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ (ဥပမာ Gnome3နှင့် KDE), သို့သော်၎င်းသည် Windows အတွက်အခမဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်ုပ်သည် Windows application သုံး၍ အသုံးပြုလိုသူများအနက်တစ် ဦး ဖြစ်သည် အထိမျးအမှတျWindows software နဲ့အတူ Linux ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားနိုင်မှာပါ။ (applications အားလုံးကို WINE မှ run လို့မရပါဘူး) ReactOS ဆိုတာ Windows နဲ့ယှဉ်ရင်ကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။
ကြိုးစားရန်ဝံ့ ReactOS နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုငါတို့နှင့်အတူမျှဝေပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ReactOS, Windows ၏ Open Source ဗားရှင်း
တကယ်တော့ Reactos က WINE ကိုသုံးတယ်။
ပိုမိုတိကျစွာပြောရလျှင် WINE နှင့် ReactOS နှစ်ခုစလုံးသည်စာကြည့်တိုက်များနှင့်အခြားဆော့ဖ်ဝဲအပိုင်းအစများကိုမျှဝေသည်။ နှစ် ဦး စလုံးအသိုင်းအဝိုင်းအတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်နှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားမှအကျိုး။
WINE သည် UNIX ကဲ့သို့သောစနစ်များပေါ်တွင် windows ကဲ့သို့ application များကို run ရန်လိုက်ဖက်တဲ့အလွှာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ReactOS သည် Windows NT kernel ၏ဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ operating system တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
သူတို့က ReactOS သည်စစ်ထုတ်ထားသော Windows NT source code ကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသလော။
ဗစ်တာ Rivarola ဟုသူကပြောသည်
Miguel မဟုတ်ဘူး။ မမှန်ပါဘူး
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ... အချို့ crackers များသည် Windows 2000 ၏ source code ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်တရားမဝင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုကောလာဟလထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ReactOS developer များသည်ချိုးဖောက်သောကုဒ်မဖြစ်ပွားခြင်း (သို့) ဖယ်ရှားခြင်းမပြုရန်သေချာစေရန်သူတို့၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုလုံးကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား။ လက်ဖြင့်သေသေချာချာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအချိန်များစွာကြာသည်၊ လများ၊ နှစ်များများရှိခဲ့လျှင်ကျွန်တော်မမှတ်မိနိုင်ပါ။ သို့သော်သူတို့လုပ်ခဲ့ကြပြီးအနာဂတ်၌ထိုအငြင်းပွားမှုကိုအသုံးချနိုင်သူအားလုံး၏ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားလိုက်သည်။
Victor Rivarola အားပြန်ကြားပါ
အားသာချက်များမှာ windows interface နှင့်ရင်းနှီးမှုရှိခြင်းအပြင်၎င်းတွင်ဗိုင်းရပ်စ်များမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
Abel firvida ဟုသူကပြောသည်
တကယ်လို့သင့်မှာ YouTube မှာဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိရင် ReactOS မှာ windows virus တွေ run နေတယ်
Abel Firvida အားပြန်ပြောပါ
ReactOS သည် Microsoft Operating System အတွက် binaries နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်အနာဂတ်အတွက် Microsoft ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုစနစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇွန်လမှ စ၍ စီမံကိန်းကိုရုရှား၌ဒုတိယတရားဝင်လည်ပတ်ရေးစနစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ရန်မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိသည်။ http://www.muylinux.com/2015/06/22/rusia-reactos-linux
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ထောက်ပံ့ထားသောဟာ့ဒ်ဝဲသည်အကန့်အသတ်ရှိနေပြီး virtual machine များတွင်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အတွေ့အကြုံကောင်းအတွက်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပေါ်မူတည်သည်။ https://www.reactos.org/wiki/Supported_Hardware
ငါစမ်းသပ်ရန်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးသည်။ bug report သို့မဟုတ် community support ကိုကြိုဆိုသည်။
စိမ်းနေတုန်းပဲ ၎င်းတွင်တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာအချို့ရှိသည်။ ငါလအနည်းငယ်အတွင်းကကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ် တော်တော်မြန်တယ် ၎င်းသည် Microsoft Office နှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်း၊ Wine နှင့်တူညီသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်၊ ကျွန်ုပ်နားလည်သကဲ့သို့သူတို့သည်အချို့ကုဒ်များကိုမျှဝေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ MS-Access ကို install လုပ်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာငါ့အား Wine နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သည်။
အဆုံးမှာ Windows XP နှင့်အတူ Virtualbox ကို။ အကောင်းဆုံးကတော့ installer ပဲ။ repo programs ကိုခဏလေး download လုပ်တယ်။
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ တကယ်ကဘယ်သူလဲ MS Access ကိုသုံးတာလဲ။ ကျနော်တို့ 2015 ခုနှစ်၌ရှိကြ၏ !!
ကျွန်ုပ်သည် Access ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလျှောက်ထားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပရိုဂရမ်ရေးသားရန်စိတ်ကူးမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလုပ်များစွာချွေတာပြီးစာရင်းအင်းသေးသေးလေးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ငါ့မှာရှိခဲ့သည့်နောက်အခြေခံတစ်ခုမှာဘဏ်အကောင့်များကိုသာစီမံခန့်ခွဲရန်၊ ကျွန်ုပ်သည် LibreOffice သို့သွားသော်လည်းအခြားတစ်ခုမှာမူမရသေးပါ။ ကျွန်တော့်မှာ module နှစ်ခုရှိတယ်။ တတိယကတော့ပျောက်နေတယ်။
ပြနာက LibreOffice မှအစီရင်ခံစာများ၊ သူတို့က subreports ကိုခွင့်မပြုဘူး၊ အစီရင်ခံစာကိုနည်းနည်းရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ဖို့ငါမနှစ်သက်ပါဘူးနောက်ဆက်တွဲအချက်အလက်များ၏မေးမြန်းချက်များနှင့်အတူရှုပ်ထွေးသည်။
ငါပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်၊ အစီရင်ခံစာများအတွက် subforms ဖြင့်သူတို့ကနည်းနည်းရှည်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကစာမျက်နှာတစ်ခုနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး၊ ဇယားထိန်းချုပ်မှုကိုစာမျက်နှာများစွာမှာထားလို့မရဘူး။
Mariadb (သို့) Mysqlo ကိုသုံးတာဟာငါစီမံခန့်ခွဲရမယ့်အရာအတွက်အလွန်အကျွံပုံရသည်။
ဒါကြောင့်မို့ MS-Access ကိုငါဆက်သုံးနေသေးတယ်၊ ဒါကလဲငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည် virtual machine တွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ဖူးပြီးပထမပြောင်းလဲမှုတွင်အလွန်မတည်ငြိမ်ခဲ့ပါ။ မည်သည့် version ကိုသင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီလဲ။
သို့သော်စပျစ်ဝိုင်သည် Winodws အတွက်သာဖြစ်ပြီးစပျစ်ဝိုင်၊ sqlyog, MLCad, amstrad cpc emulators, အချို့ဂိမ်းများစသဖြင့်စသည်တို့နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော application များအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Packet system နှင့် ပတ်သက်၍ Windows 10 တွင်၎င်းတို့ဟုခေါ်သောတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် OneGet (သူတို့နောက်ဆုံး Windows နဲ့နောက်ဆုံးဖြန့်ချိမလားဆိုတာကိုတော့ငါမသိဘူး) ပြီးတော့အဲဒီမတိုင်ခင်ကရှိနှင့်ပြီးသား ချောကလက် သောတူညီသောရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်။
ငါထင်တာကတော့သိပ်ကိုကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုပါဘဲ။ ဗားရှင်း ၁.၀ ထုတ်လွှင့်သောနေ့၌ကျွန်ုပ်ကြိုးစားချင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မလိုအပ်သည်ကိုအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ Reactos သည်၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သော်လည်း (နောက်ပြန်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပတ်သက်သော) ၎င်းသည်လိုက်စားနေသောပလက်ဖောင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤစနစ်သည်အလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်တွင်လေးနက်သောအလုပ်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။
နိုဝင်ဘာလ 1, 2015 5:10 pm တွင်
သူတို့က ReactOS သည်စစ်ထုတ်ထားသော Windows NT source code ကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။
ငါတော့မထင်ဘူး။ ငါနားလည်တာကအလုပ်အားလုံးသည် Reverse engineering မှတစ်ဆင့် Windows NT kernel ၏ဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ Open Source ကုဒ်အဖြစ်ထုတ်ပြန်သည်။
NT code ပေါက်ကြားသည့်အချိန်နှင့်သုံးစွဲသူများစွာက ReactOS တွင်၎င်းစီမံကိန်းအားအရှိန်မြှင့်ရန်အသုံးပြုရန်အဆိုပြုထားသောအချိန်ကိုမှတ်မိသည်။ သို့သော် developer များကတရားမ ၀ င်ခြင်းနှင့်အခြားအရှုပ်အထွေးမှုများကြောင့်တရားမ ၀ င် code များ (၀ င်းဒိုးမှကူးယူခြင်း / ကူးထည့်ခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ) ။ အလွန်ရှုပ်ထွေးမှုအလွန်များသဖြင့်ကုဒ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုလုပ်မီနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှတရားမဝင်မှုများမတွေ့ရှိမချင်းစီမံကိန်းကိုလုံးဝရပ်တန့်ခဲ့သည်။
အဲဒါကိုမိုက်ခရိုဆော့ကမစစ်ဆေးဘူး။ ReactOS developer များသည်တရားမ ၀ င် code များကိုမသုံးချင်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့်သူတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းခြင်းကိုမပြုလုပ်သောကြောင့်ပြင်ပစာရင်းစစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် (အသိုင်းအဝိုင်းကငွေပေးချေသည့်အရာသို့မဟုတ်တစ်ခုခု) ။
နောက်အဖြေတစ်ခုမှာငါပြောခဲ့တာကအခုရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယတရားဝင် OS ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းကိုရှေ့ဆက်သွားမှာပါ။
စိတ်ဝင်စားသူများကို bug များကိုသတင်းပို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ReactOS နှင့် Wine အသိုင်းအဝိုင်းကိုကူညီသည်။
သင်ပိုမိုလေ့လာလိုပါက ReactOS စာမျက်နှာ (www.reactos.org) သို့မဟုတ်လူထုဖိုရမ်များကိုစစ်ဆေးပါ။
ဒေါ်လာသန်းမေးခွန်းတစ်ခု, ဒီစနစ်ကမဆိုအသုံးပြုမှုရှိပါသလား ကွန်ပြူတာ၏ဂန္ထ ၀ င်သိချင်စိတ်အပြင်ငါဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အတိတ်ကာလ၌ကြိုးစား။ ရိုးရိုးသားသားပင်လျှင် ၀ င်းဒိုးပရိုဂရမ်များလည်ပတ်ရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုအခါငါစပျစ်ရည်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး ၎င်းသည် alpha state ရှိ software ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏တိုးတက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောထားသည်။ ၎င်းသည်အခြားမည်သည့် OS မှမဆိုအခြားအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလမ်းညွှန်ရန်နှင့်လုပ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည် (ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာများမှရုပ်ရှင်များကိုပင်ကြည့်နိုင်သည်) ။
သို့သော်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ၏သိလိုစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ကြည့်လျှင် ReactOS ကိုစမ်းသပ်ပြီးနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်ပြီးအမှားများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများသည်ဤအဖိုးတန်သော software ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ လက်ရှိကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအားလုံးနီးပါးသည် Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ပျင်းရိသည်ဟူသောအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်သင်လိုအပ်သမျှကိုလုပ်သည်။ !
အဲလက်စ် Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Alex Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
တစ်စုံတစ် ဦး ကဒါကိုလုပ်နေတာကောင်းတယ်၊ ငါမကြာသေးခင်က ReactOS၊ Internet မရှိဘဲစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့် package manager နဲ့ဘာမှ install လုပ်လို့မရဘူး။ ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုမေးစရာမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။
- WAMP သည်သင့်အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်၊ သင် application တစ်ခုကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်စီမံခဲ့သလား။
- မင်း Python မှာ socket functions ဒါမှမဟုတ် SimpleHTTPServer လိုမျိုး module တစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။
Reactos = ဝိုင် - gnu / linux
Percona TokuDB - Linux အတွက် MySQL / MariaDB ရှိစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့်မြင့်မားသော volumes များ